Top Stories - Part 18
१२ वर्षपछि विश्वकपमा छानिएको साउदी उदघाटन खेलका लागि तयार
नेप्लेज, २४ जेठ । साउदी अरव एशियाली फुटबलको महारथी भन्दा फरक पर्दैन । महादेशीय स्तरमा उसको प्रदर्शन सधैं उत्कृष्ट रहन्छ । तीन पटक एशियन कप जितेको साउदी अरवले सरकारी लगानी अनुसारको प्रतिफल विश्व स्तरमा हासिल गर्न अझै सकेको छैन । साउदी…
विश्वकपका लागि पोर्चुगल टिम रुस प्रस्थान
नेप्लेज,२४ जेठ । आसन्न फिफा विश्वकपका लागि युरोपियन च्याम्पियन पोर्चुगल रसिया प्रस्थान गरेको छ । विश्वकपमा ठुलो लक्ष्यका साथ रसिया उडेको पोर्चुगल टिमलाई राष्ट्रपति मर्सेलो रिबेलो डी सोउसाले विदाई गरे । कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डोको…
टिम छनोट हुँदापनि विश्वकप खेल्न नपाउने चर्चित खेलाडी
नेप्लेज, २२ जेठ । फिफा विश्वकप नजिकिँदै छ । जर्मनीका प्रशिक्षक जोचिम लोले विश्वकप खेल्ने टिमका सदस्यको घोषणा गर्दा अविश्वसनिय रुपमा लेरोई सानेको नाम अटाएनन् । २३ सदस्यिय टिम सार्वजनिक गर्दा लेरोई साने नअट्नुले इंग्लिस प्रिमियर लिग हेर्ने…
एसियाली छनोटमा अपराजित इरानको विश्वकप यात्रा (प्रोफाइल)
नेप्लेज, २३ जेठ । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा इरान सधैं केन्द्रमा रहन्छ । अमेरिका र रुसको राजनीतिक कोपभाजनमा पर्ने इरान एशियाको पावरहाउसकै रुपमा चिनिन्छ । राजनीतिमा मात्र होइन फुटबलमा पनि इरान एशियाली पावर हाउस हो । विश्वकपको अघिल्लो…
विश्वकप खेल्न इरान रुस पुग्यो
नेप्लेज, २३ जेठ । आठ दिन पछि सुरुहुने फिफा विश्वकप फुटबलमा सहभागि हुन इरानी टिम रसिया पुगेको छ । इरान विश्वकपमा सहभागि टिममा सबैभन्दा पहिला रसिया पुगेको हो । समूह बी मा रहेको इरानले जुन १५ तारिखमा पहिलो खेल खेल्ने छ । इरानको समूहमा पूर्व…
विश्वकपका लागि जर्मनी टिमको घोषणा, लेरोय साने टिममा परेनन्
साविक विश्वकप विजेता जर्मनीले रुस विश्वकपका लागि टिमको घोषणा गरेको छ । जसमा म्यानचेस्टर सिटीका खेलाडी लेरोय सानेले स्थान बनाउन सकेनन । प्रशिक्षक जोकिम लोले घोषणा गरेको अन्तिम नामावलीमा राम्रो फर्ममा रहेका खेलाडी साने अटाउन सकेनन । साथै…
भिडियो एसिस्टेन्ट रेफ्री (भिएआर) के हो ? रसिया विश्वकपमा कतिको सफल होला ?
नेप्लेज,२१ जेठ । प्रविधिकाे विकास र यसको प्रयोगले हरेक कुरालाइ सहज बनाउदैं लगेको छ । खेलकुदमा पनि यो लागु हुन्छ । क्रिकेटमा धेरै पहिले देखीनै रिप्ले प्रणाली लागु हुदैं आएको छ । फुटवलमा पनि खेललाइ विवाद रहित बनाउन भिडियो एसिसटेन्ट रेफ्रि…
ब्राजिल विश्वकपका अविश्मरणीय सात क्षण
नेप्लेज, १९ जेठ । विश्व फुटबलको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता विश्वकपका सबै संस्करण सम्झन लायक हुन्छन् । प्रत्येक संस्करणमा खेलाडी, टिम, फ्यान, प्रशिक्षक लगायत जो यो खेलसँग सम्बन्धित छन्, उनीहरुको क्रियाकपालले यो फुटबल महाकुम्भको मान अझ…
मेस्सीलाई म्याराडोना जसरी टिमको सपोर्ट छैन– क्लाउडियो कानिजीया
तपाईंको पूरा जीवनमा ती पाँच गोल सम्झनुस् न जुन गोल गर्दा तपाईंले शानदार सेलिब्रेसन गर्नुभएको थियो ? यस्ता खाले प्रश्न अर्जेन्टिनी फुटबल फ्यानहरुले उनीहरुको ह्वाट्सएप ग्रुपमा बारम्बार सोधिरहन्छन् ? विशेष गरी ३५ नाघेका फ्यानहरुले । र, कसैले…
विश्वकप विजेताले कति पुरस्कार पाउँछन् ?
नेप्लेज, ८ जेठ । विश्व फुटबलको महाकुम्भ विश्वकप फुटबलको नयाँ संस्करण सुरु हुन २३ दिन बाँकी छ । रुसमा आगामी जुन १४ देखि सुरु हुने विश्वकप कसले उठाउला भनेर चासो सुरु भइसकेको छ । सहभागी टोलीहरु धमाधम टिम घोषणामा लागेका छन् ।…